Indlela i-Google esebenzisa ngayo ulwazi lendawo – Ubumfihlo kanye Nemigomo – I-Google
Kungani i-Google isebenzisa ulwazi lendawo?
I-Google iyazi kanjani indawo yami?
Ilondolozwe kanjani indawo ku-Akhawunti yami ye-Google?
Isetshenziswa kanjani indawo ukubonisa izikhangiso?
Inqobmgomo Yobumfihlo ye-Google ichaza indlela esiphatha ngayo ulwazi uma usebenzisa imikhiqizo namasevisi e-Google, kufaka phakathi ulwazi lendawo. Leli khasi linikezela ngolwazi olungeziwe mayelana nolwazi lendawo esiluqoqayo nokuthi ungalulawula kanjani.
Ukunikezela ngemizwa ebalulekile, elusizo kumaphakathi nalokho i-Google ekwenzayo, futhi ulwazi lendawo ludlala indima ebalulekile ekwenzeni lokho. Kusuka kuzinkomba zokushayela, kuya ekuqinisekiseni imiphumela yakho yosesho kufaka phakathi izinto eziseduze nawe, kuya ekukuboniseni uma indawo yokudla imatasa, indawo ingenza imizwa yakho kuyo yonke i-Google ukuthi ihlobane kakhulu futhi ibe lusizo. Ulwazi lendawo lusiza ngmsebenzi womkhiqizo omaphakathi, njengokushayela iwebhusayithi olimi olufanele noma ukusiza ukugcina amasevisi e-Google aphephile.
Ngokuya ngemikhiqizo oyisebenzisayo namasethingi owakhethayo, unganikezela i-Google ngezinhlobo ezahlukahlukene zolwazi lendawo ezibalulekile ekwenzeni ukuthi amanye amasevisi asebenze nokwenza amanye abe wusizo kakhulu kuwe. Indawo ingavela kumasignali esikhathi sangempela, njengekheli lakho lasesizindeni se-inthanethi noma indawo yedivayisi, kanye nomsebenzi wakho wangaphambilini kumasayithi e-Google namasevisi, ukuze kuqondiswe imizwa yokuqukethwe kwakho. Ngezansi yizindlela eziyisisekelo esingazisebenzisela ukuthola ulwazi mayelana nendawo yakho.
Kusukela kukheli lasesizindeni se-inthanethi lokuxhumeka kwakho ku-Inthanethi
Ikheli lasesizindeni se-inthanethi (eliphinde libizwe ngokuthi ikheli le-Inthanethi) labelwa idivayisi yakho Ngumhlinzeki nge-inthanethi, futhi liyimfuneko yokusebenzisa i-inthanethi. Amakheli asesizindeni se-inthanethi asetshenziselwa ukwenza uxhumo phakathi kwedivayisi yakho namawebhusayithi namasevisi owasebenzisayo. Amakheli asesizindeni se-inthanethi ngamafuphi nje asekelwe endaweni. Lokhu kusho ukuthi noma yimaphi amawebhusayithi owasebenzisayo, kuhlanganise ne-google.com, angathola ulwazi oluthile mayelana nendawo yakho ejwayelekile.
Njengamanye amasevisi amaningi e-inthanethi, i-Google ingasebenzisa ulwazi oluphathelene nendawo ejwayelekile okuyo ukuze ikunike amasevisi athile ayisisekelo. Ngokusikisela indawo ejwayelekile okuyo ngokwesibonelo kusho ukuthi i-Google ingakunika imiphumela ehambisanayo, futhi igcine i-akhawunti yakho iphephile ngokuthola umsebenzi ongajwayelekile, njengokungena ngemvume edolobheni elisha.
Kusukela emsebenzini wakho wangaphambilini
Njengoba usebenzisa amasevisi ethu, singacabanga ukuthi unentshisekelo endaweni ngisho noma idivayisi yakho ingasitsheli uqobo lapho ukhona. Isibonelo, uma usesha “Amakhefi e-Paris”, singacabanga ukuthi ungathanda ukubona izindawo eziseduze ne-Paris futhi sikubonise imiphumela yamakhefi walapho. Ezinye zezinto ezivela emsebenzini wakho, njengosesho olwedlule, zingahlanganisa nendawo ejwayelekile obukade ukuyo ngaleso sikhathi. Ngokuya ngamasethingi akho, lolu hlobo lolwazi lungalondolozwa ne-akhawunti yakho futhi lusetshenziswe njengokokufaka, ngokwesibonelo ukunquma ukuthi kungenzeka usese se-Pairs yini lapho wenza usesho olwengeziwe ngokuhamba kwesikhathi.
Kusukela ezindaweni zakho ezinelebuli
Futhi ungakhetha ukusitshela ngezindawo ezibalulekile kuwe, njengekhaya lakho noma umsebenzi wakho. Lokhu kungakusiza ukwenza izinto njengokudonsa izinkomba-ndlela ngokushesha ngokudonsa ngokuzenzakalela amakheli akho asekhaya nasemsebenzini. Lolu lwazi lungasetshenziswa futhi ukukhuthaza imiphumela esikunikezela yona. Funda kabanzi
Kusuka kumadivayisi akho
Amadivayisi amaningi, njengamafoni noma amakhompuyutha, angathola indawo yawo ngqo. Ungavumela i-Google nezinye izinhlelo zokusebenza zikuhlinzeke ngezici eziwusizo ngokuya ngokuthi idivayisi yakho ikuphi. Isibonelo, uma ushiywa isikhathi sokuhlangana nabangani bakho, empeleni uzodinga ukusebenzisa uhlelo lokusebenza lokuzulazula ukuze wazi indlela esheshayo yokufika lapho uya khona. Ukuze uthole izinkomba-ndlela eziphenduphendukayo, kungadingeka ukuba uvule indawo yedivayisi yakho bese unike uhlelo lokusebenza imvume yokuzifinyelela. Noma ngokolunye usesho “njengesitolo sekhofi”, “isitobhi sebhasi” noma “i-atm”, imiphumela ivame ukuba wusizo kakhulu uma indawo ngqo itholakala.
Kudivayisi yakho ye-Android, uma ukhetha ukuvula indawo yedivayisi yakho, ungasebenzisa izici ezifana nokuzula, ukunika uhlelo lokusebenza ukufinyelela endaweni yakho yamanje, noma ukuthola ifoni yakho. Futhi ungakhetha ukuthi iziphi izinhlelo zokusebenza ezinemvume yokusebenzisa indawo yedivayisi yakho ngokulawula okulula okukuvumela ukuthi uvule noma uvale imvume kuhlelo lokusebenza ngalunye. Ku-Android, ungabona uma uhlelo lokusebenza lucela ukusebenzisa indawo yakho esuselwe ku-GPS yefoni uma iphezulu lesikrini sakho libonisa indawo . Funda kabanzi
Amasevisi endawo ye-Google
Kumadivayisi amaningi e-Android, i-Google, njengomhlinzeki wendawo yenethiwekhi, ihlinzeka ngamasevisi endawo abizwa ngokuthi Amasevisi endawo ye-Google (GLS), aziwa ku-Android 9 nangaphezulu ngokuthi Ukuqonda kwendawo ye-Google. Le sevisi iqonde ukuhlinzeka ngendawo yedivayisi enembe kakhulu kanye nokuthuthukisa ukunemba kwendawo. Amaselula amaningi ahlonyiswe nge-GPS, esebenzisa amasignali avela kumasathelayithi ukucacisa indawo yedivayisi – kodwa, ngamasevisi endawo ye-Google, ulwazi olungeziwe oluvela ku-Wi-Fi eseduze, amanethiwekhi eselula, nezinzwa zedivayisi kungaqoqwa ukuze kutholwe indawo yedivayisi yakho. Yenza lokhu ngokuqoqa njalo idatha yendawo evela kudivayisi yakho futhi iyisebenzise ngendlela engaziwa yokuthuthukisa ukunemba kwendawo.
Ungakhubaza amasevisi endawo ye-Google noma kunini kuzilungiselelo zendawo zedivayisi yakho. Indawo yedivayisi yakho izoqhubeka nokusebenza ngisho noma ngabe i-GLS ivaliwe, kodwa idivayisi izoncika ku-GPS ukulinganisela indawo yedivayisi kuzinhlelo zokusebenza ezinemvume edingekayo. Amasevisi endawo ye-Google ahlukile kunesilungiselelo sendawo sedivayisi yakho. Funda kabanzi
Amasethingi nezimvume eziku-Android zilawula izinzwa zedivayisi yakho (njenge-GPS) noma indawo esekelwe kunethiwekhi (njenge-GLS) isetshenziselwa ukucacisa indawo yakho nokuthi iziphi izinhlelo zokusebenza ezikwazi ukufinyelela leyo ndawo. Awaphazamisi indlela amawebhusayithi nezinhlelo zokusebenza ezingasikisela ngayo indawo yakho ngezinye izindlela, njengokuvela kukheli lasesizindeni se-inthanethi.
Kuye ngemikhiqizo kanye namasevisi e-Google owasebenzisayo kanye nezilungiselelo zako, i-Google ingalondoloza ulwazi lendawo ku-akhawunti yakho ye-Google. Okubili kwezindawo ezivame kakhulu lapho lolu lwazi lungalondolozwa khona umlando wendawo kanye nomsebenzi wewebhu nohlelo lokusebenza.
Umlando Wendawo we-Google
Uma ungena kumlando wendawo futhi idivayisi yakhoibika indawo, endawo enembile yamadivayisi akho angene ngemvume izoqoqwa futhi ilondolozwe, ngisho noma ungasebenzisi umkhiqizo noma isevisi ye-Google. Lokhu kusiza ukudala Umugqa wesikhathi wakho lapho idatha yomlando wendawo ilondolozwe khona, futhi ingasetshenziselwa ukuthuthukisa izincomo zangakusasa ku-Google. Ungabuka, uhlele, futhi ususe okulondoloziwe Kumugqa wesikhathi wakho noma kunini.
Ukuvula umlando wendawo kunikezela ngemizwa eyenziwe ngezifiso kakhulu kuyo yonke i-Google—izindawo zokudla eziphakanyiswe ku-Google Amamephu ngokususelwe ezindaweni ze-dining ozivakashele, ulwazi lesikhathi sangempela mayelana nezikhathi ezilungile ukusuka ekhaya noma emsebenzini ukuze wehlule ithrafikhi, kanye nama-albhamu ezithombeni ze-Google adalwe ngokuzenzakalela kusuka ezindaweni ozivakashele.
Ukuze ucacise ukuthi uvule umlando wendawo, vakashela izilawuli zomsebenzi wakho. Ungacelwa ukungena ngemvume, futhi kusuka lapho, ungabuka ukuthi ingabe lokhu kulawula kuvuliwe yini. Ngenkathi ungamisa kancane iqoqo lendatha yomlando wendawo, idatha yakho yomlando wendawo izoqhubeka nokulondolozwa uze uyisuse. Funda kabanzi
Uma ususa idatha yakho yomlando wendawo, ungasathola enye idatha yendawo elondolozwe kwenye indawo—njengakumsebenzisi wewebhu nohlelo lokusebenza.
Umsebenzi wewebhu nowohlelo lokusebenza
Uma umsebenzi wewebhu nohlelo lokusebenza unikwe amandla, usesho lwakho kanye nomsebenzi kusuka kwinombolo yamanye amasevisi e-Google kulondolozwa ku-akhawunti yakho ye-Google. Umsebenzi olondolozwe kumsebenzi wewebhu nohlelo lokusebenza ungabandakanya umlando wendawo. Njengesibonelo, uma uthayipha “isimo sezulu” kusesho futhi uthola imiphumela ngokususelwe lapho ukhona, lo msebenzi, kufaka phakathi indawo esetshenziswe ukunikezela ngalo mphumela, iyalondolozwa kumsebenzi wakho wewebhu nohlelo lokusebenza. Indawo esetshenzisiwe nelondoloziwe ngomsebenzi wakho wewebhu nohlelo lokusebenza kungavela kumasignali afana nekheli lakho le-IP ledivayisi, uma ukhethe ukuvula izilungiselelo zendawo zedivayisi yakho.
Ukuvula isilungiselelo sakho somsebenzi wewebhu nohlelo lokusebenza kusisiza ukuthi sikubonise imiphumela yosesho ebalulekile, izikhangiso eziphathelene kakhulu, neziphakamiso eziboshezelwe kakhulu–njengokuthi uma ubona usesho lwakho luphakamisa ngokuzenzakalelayo ngokususelwe kusesho lwakho lwangaphambilini. Ungabuka futhi ususe okukumsebenzi wakho wewebhu nohlelo lokusebenza, noma umise kancane ku-akhawunti yakho ye-Google. Ukumisa kancane umsebenzi wewebhu nohlelo lokusebenza kuzomisa ukulondoloza usesho lwakho lwangaphambilini kusuka kumasevisi amanye e-Google. Ngisho noma ususa idatha yomsebenzi wewebhu nohlelo lokusebenza, ungasathola idatha yendawo kwenye indawo—njengomlando wendawo.
Ukuze ucacise ukuthi ingabe uvule umsebenzi wewebhu nohlelo lokusebenza, vakashela Izilawuli zomsebenzi. Ungacelwa ukungena ngemvume, futhi kusuka lapho, ungabuka ukuthi ingabe lokhu kulawula kuvuliwe yini. Funda kabanzi
Izikhangiso zingasetshenziswa ngokususelwa endaweni yakho evamile. Lokhu kungabandakanya indawo esuselwe ekhelini le-IP ledivayisi. Kuye ngezilungiselelo zakho zokwenza ngezifiso izikhangiso, futhi ungabona izikhangiso ngokususelwe kumsebenzi wakho ku-akhawunti yakho ye-Google. Lokhu kubandakanya umsebenzi olondolozwe kumsebenzi wakho wewebhu nohlelo lokusebenza, ongasetshenziselwa izikhangiso ezilusizo. Esinye isibonelo ukuthi uma unike amandla umlando wendawo kanye ne-regularly frequent ski resorts, kamuva ungahle ubone isikhangiso somsebenzi we-ski uma ubuke ividiyo ku-YouTube. I-Google futhi isebenzisa Umlando wendawo ngendlela engaziwa futhi ebaliwe, kubasebenzisi abakhethe ukungena kuyo, ukuze isize abakhangisi ukulinganisa ukuthi umkhankaso wesikhangiso waku-inthanethi usiza kangakanani ezitolo zangempela noma izindawo. Asabelani ngomlando wendawo noma olunye ulwazi okukhombayo nabakhangisi.
Uyakwazi ukulawula idatha elondolozwe ku-akhawunti yakho ye-Google, futhi ungakwazi ukuvala izikhangiso ezenziwe ngezifiso noma kunini. Uma ukwenza ngezifiso izikhangiso kuvaliwe, i-Google ayisebenzisi idatha elondolozwe ku-akhawunti yakho ye-Google ukunikezela ngezikhangiso ezihlobene kakhulu kuwe.